Wadankee sanadkan ku guuleystey dalka ugu farxada badan caalamka? - Home somali news leader
Home NEWS Wadankee sanadkan ku guuleystey dalka ugu farxada badan caalamka?
Wadankee sanadkan ku guuleystey dalka ugu farxada badan caalamka?
Iyadoo maanta ay tahay maalinta farxada adduunka ayaa waxaa la soo saaray warbixin ku saabsan dalalka ugu farxada badan caalamka iyadoo sanad walbana la soo saaro warbixinta.
Warbixinta laga diyaariyey waddamada dunida ugu farxadda badan kaalinta koowaad ayaa waxaa markale ku guuleystey dalka Finland halka kaalinta labaad ka galay dalka Denmark, halka dalalka Swizerland, Iceland iyo Netherland ay kaalmaha xiga galeen.
New Zealand oo ka baxsan waddamada qaaradda Yurub ayaa ka mid noqday liiska 10-ka dal ee dunida ugu farxadda badan.Ingiriiska oo sanadki hore ku jiray kaalinta 13-aad, wuxuu sanadkan u daadagay kaalinta 17-aad.
Kooxaha daraasadda sameeyey waxay su’aalo weydiiyeen dadyow kala duwan oo ku nool 149 dal si ay u ogaadeen farxadda ay haystaan.
Qodobbada daraasadda lagu eegayeyna waxaa ka mid ahaa taageerada buslho uu helo, xurriyadda shaqsiyadeed, wadarta wax soo saarka gudaha (GDP) iyo heerka musuqmaasuq ee dalkaasi oo iyaduna ka mid ahayd waxyaabaha daraasadda qaybta ka ahaa.
Waddamada ugu farxadda yarn dunidana daraasaddu waxay ku sheegtay iney yihiin dalalka Afghanitsaan, Lesotho, Botswana, Rwanda iyo Zimbabwe.
New Zealand waa dalka keli ah ee waddamada midowga yurub ka baxsan ee ka mid noqday 10-ka dal ee duniga ugu farxadda badan
Previous articleTurkey concludes Istanbul Convention, which protects women from violence
Next articleJubbaland oo ka hadashay ciidamo la geeyay magaalada Doolow